Jean-Michel Cousteau Resort Fiji သည် ပြိုင်ဘက်မရှိ မိသားစုအားလပ်ရက်ကို ပေးသည်။
ပင်မစာမျက်နှာ » နောက်ဆုံးရဆောင်းပါးများ » ဟိုတယ်နှင့်အပန်းဖြေစခန်းများ » Jean-Michel Cousteau Resort Fiji သည် ပြိုင်ဘက်မရှိ မိသားစုအားလပ်ရက်ကို ပေးသည်။
နိုင်ငံတကာသတင်းများ • Breaking ခရီးသွားသတင်းများ • ဖီဂျီအထူးသတင်း • ဧည့်ဝတ်ပြုခြင်းစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ • ဟိုတယ်နှင့်အပန်းဖြေစခန်းများ • အစည်းအဝေးတွေ • သတင်း • ခရီးသွားလုပ်ငန်း • Travel ကြေးနန်းသတင်းများ
ပုံအား fijiresort.com မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
အတွေ့အကြုံများကို တစ်ဖန်ပြန်လည်စုစည်းကာ မျှဝေခံစားလိုသော မိသားစုများဖြင့်၊ တောင်ပစိဖိတ်ဒေသ၏ ထိပ်တန်းဂေဟစနစ်စွန့်စားခန်း ဇိမ်ခံနေရာဖြစ်သည့် Jean-Michel Cousteau Resort၊ Fiji သည် မျိုးဆက်ပေါင်းစုံ ခရီးသွားများအတွက် သင့်လျော်သော အတွေ့အကြုံများစွာကို ပေးဆောင်ပါသည်။
South Pacific ၏ Premier Eco-Luxury Resort သည် အားလုံးအတွက် တစ်မျိုးတည်းသော လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် အတွေ့အကြုံများကို ပေးဆောင်သည်
Savusavu ပင်လယ်အော်၏သာယာသောရေပြင်ကိုအပေါ်စီးမှ Vanua Levu ကျွန်းပေါ်ရှိသီးသန့်စိမ်းလန်းစိုပြေသောအပူပိုင်းဒေသတွင်တည်ရှိသည်။ Jean-Michel Cousteau အပန်းဖြေစခန်း လပေါင်းများစွာ ခွဲခွာပြီး အဆုံးမရှိ ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်ချတ်များမှတစ်ဆင့် ချိတ်ဆက်ပြီးနောက် အနာဂတ်မျိုးဆက်များအတွက် ရေရှည်တည်မြဲသောအမှတ်တရများဖန်တီးရန်၊ အပန်းဖြေအနားယူမှုနှင့် စွန့်စားခန်းများဖန်တီးရန် ကြိုးပမ်းနေသည့် တိုးချဲ့မိသားစုကြီးများအတွက် ပြိုင်ဘက်ကင်းသော လွတ်မြောက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
မျိုးဆက်ပေါင်းစုံ ခရီးသွားလာမှု တိုးလာသည်-
အကွာအဝေးသည် နှလုံးသားကို ချစ်ခင်မြတ်နိုးလာစေသည်ဟု ဆိုထားပြီး၊ မိသားစုများသည် လွန်ခဲ့သည့် နှစ်နှစ်တာကာလအတွင်း တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ဝေးကွာသွားသည့်အချိန်များအတွက် စိတ်အားထက်သန်စွာ စုရုံးနိုင်သည်ဟု စိတ်ထဲမှာ စွဲမှတ်ထားသည်။ အဘိုးအဘွားတွေ၊ တူတွေ၊ တူတွေနဲ့ ခရီးသွားတာက ဘယ်တော့မှ ပိုအရေးကြီးတယ်။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် တိုးချဲ့မိသားစုစုဝေးမှုများ တိုးလာလိုစိတ်ဖြင့်၊ မိသားစုများသည် ပိုမိုအဓိပ္ပာယ်ရှိသော နည်းလမ်းများဖြင့် ချိတ်ဆက်ရန် နည်းလမ်းများကို ရှာဖွေနေကြသည်။ အစဉ်အလာအားဖြင့်၊ မျိုးဆက်ပေါင်းစုံ မိသားစုအားလပ်ရက်များသည် ခိုင်မာသောမိသားစုနှောင်ကြိုးများဖန်တီးရန်နှင့် ထာဝရမြတ်နိုးဖွယ်အမှတ်တရများကို ဖန်တီးရန်နည်းလမ်းများစာရင်းတွင် မြင့်မားပါသည်။
“လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်အတွင်း အခွင့်အလမ်းများစွာကို လက်လွတ်မခံခဲ့ရတဲ့အတွက် မိသားစုတွေကို ပွေ့ဖက်၊ စုရုံးပြီး ဘေးကင်းစွာ ခရီးသွားနိုင်ခဲ့တဲ့ မိသားစုတွေရဲ့ အရေးပါမှုကို အသိအမှတ်ပြုပါတယ်၊ ဧည့်သည်တွေနဲ့ သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေကို Jean-Michel Cousteau Resort မှာ ကြိုဆိုရတာက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စိတ်နှလုံးကို ပျော်ရွှင်စေတယ်။ Jean-Michel Cousteau Resort, Fiji ၏အထွေထွေမန်နေဂျာ Bartholomew Simpson ကပြောကြားခဲ့သည်။ "2022 ခုနှစ်အတွက် မိသားစု၏ ရေပုံးစာရင်းများစွာတွင် မျိုးဆက်ပေါင်းစုံ ခရီးသွားအဆင့် မြင့်လာခြင်းကြောင့် Jean-Michel Cousteau Resort သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ တောင်ပစိဖိတ်ဒေသ၏ အံ့သြဖွယ်သဘာဝ အံ့ဖွယ်များကို မီးမောင်းထိုးပြသည့် အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းနှင့် စွန့်စားခန်းများကို မျှဝေရန် ဘယ်သောအခါမှ ပိုအရေးကြီးမည်မဟုတ်ပါ။"
"ကျွန်ုပ်တို့၏ဧည့်သည်များကို အံ့သြဖွယ် အမှတ်တရ အားလပ်ရက်များ ပေးဆောင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကတိကဝတ်အတိုင်း ခိုင်မြဲနေပါသည်။"
မျိုးဆက်ပေါင်းစုံ ခရီးသွားများအတွက် ထိပ်တန်းနေရာ
မိသားစုနှောင်ကြိုး၊ ပြန်လာသူများနှင့် စွန့်စားရှာဖွေသူအသစ်များသည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အလှဆုံးရေပြင်အချို့တွင် ရေငုပ်ခြင်း၊ အေးအေးလူလူ ရေငုပ်ပြီး ပင်လယ်ကယပ်လှေဖြင့် ဧရိယာကို စူးစမ်းလေ့လာခြင်း သို့မဟုတ် လွတ်မြောက်ခြင်းအတွက် ပြီးပြည့်စုံသော မိသားစုဆက်ဆံရေးအတွက် ပြီးပြည့်စုံသည် ပျော်ပွဲစားထွက်ဖို့ သီးသန့်ကျွန်း။ အသက်အရွယ်မရွေး ခရီးသွားများအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး ဧည့်သည်များသည် ဒီရေတောများ၊ ပုလဲမွေးမြူရေးခြံ၊ စစ်မှန်သောဖီဂျီကျေးရွာသို့ သွားရောက်လည်ပတ်နိုင်သည် သို့မဟုတ် အပူပိုင်းမိုးသစ်တောကိုဖြတ်၍ ခြေလျင်တက်ကာ လျှို့ဝှက်ရေတံခွန်ကို ရှာဖွေနိုင်သည်။
အသက်အငယ်ဆုံးဧည့်သည်များပင်လျှင် အပန်းဖြေကစားနည်းများနှင့် ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများမှတစ်ဆင့် ကမ္ဘာနှင့်အဝှမ်း စူးစမ်းလေ့လာသင်ယူမှုများ ပြုလုပ်သည့် အပန်းဖြေစခန်း၏ ဆုရကလေးကလပ်ဖြစ်သည့် Bula Club သို့ လာရောက်လည်ပတ်ခြင်းဖြင့် အံ့အားသင့်သွားမည်ဖြစ်သည်။ အသက်5နှစ်နှင့်အောက် ကလေးများကို ၎င်းတို့၏ နေထိုင်မှုကာလအတွက် ၎င်းတို့၏ နို့ထိန်းဆရာမကို တာဝန်ပေးထားသည်။ နှင့် အသက်6နှစ်မှ 12 နှစ်ကြား ကလေးများသည် အပေါင်းအသင်း ဦးဆောင်သော အဖွဲ့ငယ်များ တွင် ပါဝင်ကြသည်။
Jean-Michel Cousteau Resort မှ ဝန်ထမ်းများသည် ကျွမ်းကျင်ပြီး ကြိုဆိုသော ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကို ပံ့ပိုးပေးစဉ်တွင် Covid-19 ဘေးကင်းရေးနှင့် သန့်ရှင်းရေးစံနှုန်းများကို အမြင့်ဆုံးအဆင့်ထက်ကျော်လွန်ရန် အပြည့်အဝ ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်း၊ လေ့ကျင့်သင်ကြားပြီး ကတိပြုပါသည်။ ဝန်ထမ်းများသည် ဧည့်သည်များကို မျက်နှာဖုံးများ နှင့် နှုတ်ဆက်ကြပြီး အချို့ကိစ္စများတွင် လက်အိတ်များဖြင့် လူမှုဆက်ဆံရေးနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခပ်ခွာခွာနေရန် သေချာစေမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ထိတွေ့မှုမြင့်သောနေရာများအားလုံးကို မကြာခဏ သန့်စင်ပြီး ဆေးကြောပေးမည်ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် Tourism Fiji သည် "စောင့်ရှောက်မှုဖီဂျီကတိသစ္စာ၊” နိုင်ငံသည် ခရီးသွားများအတွက် နယ်နိမိတ်များကို ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လိုက်သောကြောင့် ကပ်ရောဂါလွန်ကမ္ဘာအတွက် အဆင့်မြှင့်တင်ထားသော ဘေးကင်းရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေး ပရိုတိုကောများပါရှိသော အစီအစဉ်တစ်ခု။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကို ကျွန်းအပန်းဖြေစခန်းများ၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ အထင်ကရနေရာများနှင့် အခြားအရာများထဲမှ 200 ကျော်က ကြိုဆိုခဲ့ကြသည်။
US ရှိ အလားအလာရှိသော ဧည့်သည်များသည် (800) 246-3454 သို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း သို့မဟုတ် အီးမေးလ်ပို့ခြင်းဖြင့် ကြိုတင်မှာကြားနိုင်ပါသည်။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]သြစတြေးလျမှရောက်ရှိလာသောဧည့်သည်များအနေဖြင့် (၁၃၀၀) ၃၀၆-၁၇၁ သို့ဖုန်းခေါ်ခြင်း (သို့) အီးမေးလ်ပို့ခြင်းဖြင့်မှာယူနိုင်ပါသည် [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်].
Jean-Michel Cousteau Resort အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ fijiresort.com.
Jean-Michel Cousteau အပန်းဖြေစခန်းအကြောင်း
အဆိုပါဆုရ Jean-Michel Cousteau အပန်းဖြေစခန်း တောင်ပစိဖိတ်ဒေသတွင်အကျော်ကြားဆုံးအားလပ်ရက်ခရီးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ Vanua Levu ကျွန်းပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးမြေ ၁၇ ဧကပေါ်တွင်တည်ဆောက်ထားသောဇိမ်ခံအပန်းဖြေအပန်းဖြေစခန်းသည် Savusavu Bay ၏ငြိမ်းချမ်းသောရေပြင်ကိုရှုမြင်ပြီးစုံတွဲများ၊ မိသားစုများနှင့်စစ်မှန်သောဇိမ်ခံပစ္စည်းများနှင့်ဒေသယဉ်ကျေးမှုနှင့်အတွေ့အကြုံရှိသောခရီးသွားများအတွက်သီးသန့်ထွက်ပြေးရန်ကမ်းလှမ်းသည်။ Jean-Michel Cousteau Resort သည်ကျွန်း၏သဘာဝအလှအပ၊ ကိုယ်ပိုင်အာရုံစိုက်မှုနှင့် ၀ န်ထမ်းများ၏နွေးထွေးမှုတို့မှဆင်းသက်သောမမေ့နိုင်သောအားလပ်ရက်အတွေ့အကြုံကိုပေးသည်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုတာဝန်သိသောအပန်းဖြေစခန်းများသည်ဧည့်သည်များကိုအထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောသက်ကယ်မိုးကာများ၊ ကမ္ဘာ့အဆင့်မီထမင်းစားခန်း၊ အပန်းဖြေစရာအစီအစဉ်များ၊ ထူးခြားသောဂေဟစနစ်အတွေ့အကြုံများနှင့်ဖီဂျီမှုတ်သွင်းထားသော spa ကုထုံးများအပါအ ၀ င်သာယာဝပြောမှုမျိုးစုံကိုပေးသည်။
Canyon Equity LLC အကြောင်း
အဆိုပါ Canyon ကုမ္ပဏီများအုပ်စုကယ်လီဖိုးနီးယား၊ Larkspur တွင် အခြေစိုက်သော အပန်းဖြေစခန်းကို ပိုင်ဆိုင်သော၊ ၂၀၀၅ ခုနှစ် မေလတွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏ ဂါထာမှာ လူနေအိမ်အစိတ်အပိုင်းငယ်များဖြင့် သီးသန့်နေရာများတွင် သေးငယ်သော လူနေအိမ်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်အတူ စုစည်းညီညွတ်ပြီး အလွန်သဟဇာတဖြစ်မှု ခံစားချက်ကို ဖန်တီးခြင်းဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ ဂါထာမှာ အလွန်ဇိမ်ခံသည့် အမှတ်တံဆိပ်ပါ အပန်းဖြေစခန်းငယ်များကို ရယူရန်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ဖြစ်သည်။ . 2005 ခုနှစ်တွင် ၎င်း၏ Canyon ကိုဖွဲ့စည်းပြီးကတည်းက ဖီဂျီ၏စိမ်းပြာရောင်ရေပြင်မှ Yellowstone ၏မြင့်မားသောတောင်ထွတ်အထိ၊ Santa Fe ၏အနုပညာရှင်ကိုလိုနီနယ်များနှင့် Utah တောင်ပိုင်း Canyons များအထိနေရာများတွင်အထင်ကြီးစရာကောင်းသောအပန်းဖြေစခန်းအစုစုကိုဖန်တီးခဲ့သည်။
Canyon Group ၏အစုစုတွင် Amangiri (Utah), Amangani (Jackson, Wyoming), Four Seasons Resort Rancho Encantado (Santa Fe, New Mexico), Jean-Michel Cousteau Resort (Fiji) နှင့် Dunton Hot Springs, (Dunton) ကော်လိုရာဒို) ။ Papagayo ကျွန်းဆွယ်၊ ကော်စတာရီကာနှင့်မက္ကဆီကိုနိုင်ငံတွင်နှစ်ပေါင်း ၄၀၀ သက်တမ်းရှိ Hacienda ကဲ့သို့သောနေရာများ၌အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောတိုးတက်မှုအချို့ကိုတစ်ခုစီစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်သောအခါအလွန်ဇိမ်ခံနိုင်ငံတကာခရီးသွားများ၏အထူးစျေးကွက်တွင်ကြီးကျယ်ခမ်းနားသောထုတ်ပြန်ချက်များပြုလုပ်ရန်ရည်မှန်းထားသည်။ မရ။